Mugabe makaipa: A current and future Zimbabwe
Zimbabwe would have been a democratic and thriving country had it not been for western interference that has given uncle Bob the cover and the excuse to hang on to power . It is western interference in the internal affairs of Zimbabwe that led to the degeneration of Zimbabwe today.
Instead of engaging the old leader in a respectful and cordial manner, Gay activist had to try and humiliate Mr. Mugabe and the brits had to in their arrogance fail to fulfill land compensation agreements that where part of Zimbabwe’s independence right.
Though the problems in Zimbabwe can be traced to Mr. Mugabe, the British and Australian governments have played a catalytic role in the spiral of Zimbabwe out of control .1. by their shameless interference and neo colonial attitude towards the leadership in Zimbabwe and 2.in the refusal to complete the Compensation that was due in the post independent Zimbabwe to ensure the smooth transition of land from white owners to black Zimbabweans , something that the British can not run away from .
Ever so often, Western countries try to rewrite history in their favor but when it comes to the truth, the truth never changes .Robert Mugabe must and should do the honorable thing and allow democracy to thrive in Zimbabwe. However, the west cannot hide behind Democracy in order to achieve their own selfish closet agendas.
The opposition in Zimbabwe(and indeed across africa) must rid itself of Neo colonial influences and put the well-being of Zimbabwe(&Africa) first above all else. The United Kingdom should stay away from African affairs and let Zimbabwe chart her own destiny.
Zimbabwe is for all Zimbabweans and the West should not feel that they should have a greater say on zim’s affairs. I certainly do not like what is happening in Zimbabwe but it always raises an eyebrow when as an African I see Britain trying to show more concern for Zimbabwe that even Zimbabweans themselves. Stay away from Zimbabwe! Stop giving Mugabe an excuse to run down our brothers.
A Zimbabwe under Mugabe is still far much better than a Zimbabwe under British stooges